Ukutya oku-4 okuyingozi kakhulu ehlotyeni | IBezzia
UToñy Torres | 21/07/2021 23:55 | Iingcebiso zezempilo
Okunye ukutya kunokuba yingozi ehlotyeni kwaye kuncinci e Ukujonga izinto ezingenabungozi kunokukhokelela kwiingxaki zempilo ezinzulu. Amaqondo obushushu aphezulu ehlotyeni ngunobangela wokwanda kweebhaktiriya, ukungunda kunye neentsholongwane ezahlukeneyo ezingcolisa ukutya. Ngenxa yokunxibelelana nomzimba, kunokubangela iingxaki ezinje ngetyhefu yokutya.
Into eyaziwayo ngokungathandabuzekiyo kwaye Njengomthetho, ihlala inxulunyaniswa nokusetyenziswa kokutya kwimivalo, iivenkile zokutyela kunye neendawo apho kutyiwa khona ukutya. Nangona kunjalo, uphononongo kunye neenkcukacha-manani zibonisa ukuba uninzi lwetyhefu yokutya ehlotyeni lwenzeka kwimeko yasekhaya. Oko kubonisa ukuba inkathalo ebalulekileyo ayithathwa ngokutya ekhaya.
1 Uluhlu lokutya okunokuba yingozi ngexesha lasehlotyeni
1.2 Iimveliso ezisekwe kwiqanda
1.3 Iitapile zosiwe
Uluhlu lokutya okunokuba yingozi ngexesha lasehlotyeni
Ukuba ziyingozi kakhulu ehlotyeni akuthethi ukuba abanakuba sebusika. Oko kukuthi, uninzi lwazo ukutya okukwimeko embi okusetyenzisiweyo kungumphumo wokuphathwa kakubi. Amaqondo obushushu aphezulu akhawulezisa inkqubo, kodwa ingqele yasebusika ayikuthinteli. Ke ngoko, eyona nto icetyiswayo kukusoloko uthabatha amanyathelo okhuseleko xa uphethe ukutya.
Ewe umngcipheko wehloboUkutya okuthile kuyingozi kuba kutyiwe kakhulu ngexesha lasehlotyeni. Iinyama ezintsha ezityiwa kwi-barbeque kwaye zichitha ixesha elininzi ebushushwini ngaphambi kokupheka, iisaladi ezine-mayonnaise eyenziwe ekhaya efrijini, yimizekelo nje ethile. Kodwa uluhlu lokutya okuyingozi ehlotyeni lide, Oku kuku-4 kokutya okunomngcipheko omkhulu.
Inyama esetyenziselwa ukulungiselela iihambhega ngumxube weentlobo zezilwanyana, ezingaziwa ngokubanzi. Xa ujongene nezilwanyana ezahlukeneyo, umngcipheko mkhulu kwi-hamburger kune-cutlet okanye isiqwenga senyama esisuka kwisilwanyana esinye. Kwelinye icala, Inyama ecoliweyo inee-nooks ezininzi kunye neekhenikhi ezininzi apho iibacteria zinokukhula khona kwaye kuyinkimbinkimbi ngakumbi ukuba ubushushu bufikelele kwisiqwenga sonke ngokulinganayo.
Ngaphandle kokulibala oko Inkwenkwezi yeethambo zehlobo yi hamburger. Ke ngoko, kubalulekile ukugcina ukubanda kude kube ngumzuzu wokubeka inyama ukuba ipheke. Ngaphandle kokophula ikhonkco elibandayo kwaye ngaphandle kokuba nenyama ngaphandle ngaphandle kokukhuselwa.
Iimveliso ezisekwe kwiqanda
Iqanda kukutya okunempilo kakhulu, nangona kunokuba yingozi. I-Salmonella yenye yeebhaktheriya ezanda kwiqanda kwaye isifo basibangela kakhulu. Ukuthintela oku, ukuba uza kulungisa ukutya namaqanda oza kuthatha ngaphandle kwekhaya, kukhethwa ukuba usebenzise izinto ezinje nge-roe. Ayisiyokulungiselela imayonnaise kuphela, kodwa nakwi-omelette yeetapile kunye nezinye iisosi esekwe kwiqanda.
Ulunge kakhulu, usempilweni kwaye ungumlingane ogqibeleleyo we-barbecue, kodwa onokuba yingozi ehlotyeni. Ukucoca iitapile, kusetyenziswa ifoyile yealuminium kwaye ngaphakathi kuyenziwa umthombo wobushushu othi, xa usasazekile, uguquke ube bubumanzi. Ukuba ugoja iitapile kwaye awuzityi zonke, zigcine efrijini okanye uzitshintshe zibe kukunye ukutya, njengeetapile ezicujiweyo.
Le nyama ityebileyo kwaye isempilweni yenye yezona zinto zibuthathaka kwaye ziyingozi, ngakumbi ehlotyeni kwaye ukuba akukho manyathelo ayimfuneko. Inyama yenkukhu akufuneki ihlanjwe phambi kokupheka, izandla kunye nezinto zasekhitshini kufuneka zihlale zicocekile xa uphethe inyama. Kwaye okubaluleke kakhulu, Inyama yenkukhu kufuneka ihlale iphekwe kakuhle ngaphambi kokuba ityiwe.
Eyona ndlela yokuphepha ukutya ityhefu ehlotyeni kukusebenzisa isilumkiso. Ungaze ulibale ukuba imalunga nokutya, nokuba kumnandi kangakanani na. Ukuba uza kuba nabanye abantu kwaye unokulahleka ngokulula ngokutya, ukhethe ezinye izitya ezinokulungiswa kwangaphambili. Sukuthatha umngcipheko kwaye uphephe ukuba inkumbulo engalunganga yokutya ikonakalise ihlobo elimnandi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » ZeMpilo » Iingcebiso zezempilo » Ukutya oku-4 okuyingozi kakhulu ehlotyeni